I-OEM | XIKOO Industrial Co., Ltd.
I-XIKOO inayo yonke imikhiqizo yethu epholile yomoya eklanywe ngokuzimela futhi yathuthukiswa ngamalungelo empahla yengqondo ezimele. Singahlinzeka ngezinsizakalo zokucutshungulwa kwe-OEM ngokuya ngezidingo zamakhasimende ezivela emazweni ahlukahlukene nasezifundeni, i-OEM efana: nombala wokubonakala komkhiqizo, imisebenzi yengxenye yomkhiqizo, amandla kagesi, imvamisa, ipulagi, Ukupakisha komkhiqizo nezinye izidingo zamakhasimende, ithimba lethu lizokunikeza izinsizakalo ze-OEM ngobuqotho .
I-XIKOO ingabambisana nomkhiqizo omkhulu wokuklanywa kwesikhunta, ukuthuthukiswa, ukucutshungulwa komjovo wesikhunta, nokuqedela ukukhiqizwa komoya opholile nezinsiza ezisekela izinsizakalo, ukwabiwa kwesikhunta, ukwabelana ngezesekeli, nokwabelana okujwayelekile ukuhlinzeka ngezinsizakalo ze-ODM kumakhasimende emhlabeni jikelele.
Amandla okuthuthukiswa kwesikhunta
Inkampani yethu ingahlinzeka ngemidwebo ye-3D nemidwebo yesakhiwo sesikhunta ezinsukwini ezingu-7 kusisekelo sesampula noma imidwebo yokwakha evela kumakhasimende, iqeda ukukhiqizwa kwesikhunta futhi ilinge isikhunta ezinsukwini ezingama-45, futhi ihambise isikhunta ngemijovo ezinsukwini ezingama-50.
Umthamo wokucubungula umjovo
Amasethi ama-2 wamathani we-2,200 imishini yokubumba umjovo namasethi ama-2 wamathani we-1,800 imishini yokubumba umjovo, sinikeza insizakalo eqediwe kusuka ekuthuthukisweni komkhiqizo, ukwakheka, ukuvulwa kwesikhunta, ukubunjwa komjovo, nokuhlangana.
Umthamo Machine ukukhiqizwa
I-XIKOO inezintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo kanye nomhlangano ophelele womhlangano womshini, abasebenzi abangaphezu kwama-50 abanomhlangano abanamakhono, namasethi waminyaka yonke ama-50,000 emishini ephelele ne-SKD.
I-XIKOO inemishini yokuhlola eminingi, izingqimba zokuhlolwa kwekhwalithi, ithole amalungelo obunikazi ayishumi nambili, yadlulisa i-3C kazwelonke, isitifiketi se-EU CE, kanye neziqu ze-Middle East SASO, futhi ikhwalithi yomkhiqizo iqinisekisiwe.
Oda izinto zokusetshenziswa
Amakhasimende abambisene ne-OEM / ODM